एसाइलम आवेदन दिनेलाई पूर्व एसाइलम अफिसरका टिप्स « Khasokhas
आर्लिंटन एसाइलम अफिसमा सन् २०१४ देखि सन् २०१७ सम्म सिनियर एसाइलम अफिसरका रुपमा कार्यरत हैदी बोआसले एसाइलम गर्न चाहनेहरुलाई विभिन्न टिप्सहरु दिएकी छिन् । उनी हाल मेरिल्याण्डमा कानुन व्यवसायीका रुपमा सकृय कार्यरत रहेकी छिन् । युएससीआईएसमा ४ बर्ष काम गरिसकेपछि उनी सन् २०१८ देखि ल फर्म मार्फत कानुन व्यवसायमा सकृय भएकी हुन् ।
ठूलो ब्याकलग र केसलोड हुने भएकाले एसाइलम अफिसरहरुले सकेसम्म प्रभावकारी रुपमा आवेदनहरु पूरा गर्नमा दवाव हुने तथा एउटा एसाइलम अफिसरलाई एउटा केस हेर्नका लागि झण्डै ४ घण्टाको समय हुने उनको अनुभव रहेको छ । ४ घण्टाकै अवधिभित्र निर्णयको ड्राफ्ट तयार गर्न झण्डै १ घण्टा लाग्ने र सेक्युरिटी चेक लगायतका प्रशासनिक काम गर्न ४० मिनेट लाग्ने भएकाले अन्तरवार्ता झण्डै २ घण्टा हुने उनको अनुभव छ । अन्तरवार्ताका लागि आवेदकलाई बोलाउनुभन्दा अगाडि एसाइलम अफिसरसँग आवेदन पढ्नका लागि झण्डै २० मिनेटको मात्र अवधि हुने उनी बताउँछिन् ।
एसाइलम आवेदन दिंदा समावेश गरिने पर्सनल स्टेटमेन्ट सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने उनको भनाई छ । तर यो व्यक्तब्य धेरै लामो हुन भने जरुरी छैन । उनी भन्छिन् -‘एसाइलम अफिसरसँगको २० मिनेटको समयमा वकिलले लेखेको लामो कानुनी ब्याख्या पढ्ने समय नहुन सक्छ । त्यो बेलामा अफिसरले आवेदकको व्यक्तिगत स्टेटमेन्टमात्र पढ्न सक्छन् । व्यक्तिगत वक्तब्य पाँच पृष्ठ भन्दा कम र भन्न खोजेको विषय स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
किन एसाइलमका लागि आवेदन दिदै हुनुहुन्छ? विगतमा कस्तो हानी बेहोर्नुभएको थियो? भविश्यमा कस्तो प्रकारको डर छ ? विगतमा किन हानी बेहोर्नुपरेको थियो ? भविश्यमा किन हानीको डर छ ? यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ व्यक्तिगत स्टेटमेन्टमा दिन जरुरी रहेको तर पारिवारिक पृष्ठभूमी, शिक्षा, रोजगारको इतिहास जस्ता कुरा व्यक्तिगत स्टेटमेन्टमा राख्न जरुरी नभएको उनको भनाई छ ।
आवेदनको लागि आवश्यक कागजात पेश गर्दा अनावश्यक कागजातहरु पेश गर्न जरुरी नभएको उनको अनुभव छ । स्कुल वा कलेजका सर्टिफिकेट वा कागजात, सयौं पृष्ठका देशको अवस्थाबारेका कागजात पेश गर्न पनि जरुरी नभएको उनको भनाई छ । उनी भन्छिन् – ‘एसाइलम अफिसरहरु देशको अवस्था र त्यहाँ मानवअधिकारको स्थीतिबारे पहिले नै जानकार हुन्छन् । यदि जानकार नभएको खण्डमा पनि त्यो देशबारे रिसर्च गर्छन् । सामान्यतया एसाइलम अफिसरले अमेरिकी सरकारको विदेशमन्त्रालयको मानवअधिकारबारेको रिपोर्टलाई आधार मान्छन् । त्यसैले आवेदकले देशको अवस्थाबारे कुनै कागजात पेश गर्दा अफिसरको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको विषय हाइलाइट गरेर पेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
फर्म आई ५८९ भर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र आफ्नो सबै विवरण ठीक तरिकाले पेश गर्नुपर्ने उनको अनुभव छ । यसो गर्दा एसाइलम अफिसरलाई अन्तरवार्ताका क्रममा फर्म रिभ्यु गर्दा समयको बचत हुनेछ । यदि अन्तरवार्ताका क्रममा फर्ममा कुनै वदलाव ल्याउन परेमा अफिसरलाई यसबारे सुची प्रदान गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । नाम प्रयोग गर्दा सही र स्पेलिंग चेक गरेर गर्नुपर्ने अन्यथा पुन सेक्युरिटी चेकको अवस्था आउँदा निर्णयमा ढिलाई हुने उनी बताउँछिन् ।